Masriin Baatii Bitootessaatti Keessa Fiallnnoo Geggeeffachuf Jirti
Amajjii 29, 2018
Lammiwwan Masrii, Amajjii bara 2011 jijjiirama biyyattii keessatti fiduuf socho’anii, gaaffiin isaanii deebii argate. Waggoota toorbaa booda, haalli amma mul’atu sadarkaa biraatti akka tarkaafatan taasise. Akka xiinxaltoonni siyaasaa jedhanitti, haalawwan biyyattii tokko tokko jijjiirama wayyaawaa argamsiisanii jiran. Kan magaalaa Kaayiroo jiru – Amerikaan Yunivarsitii irraa – Saayid Saadiq akkanatti ibsan.
“Prezidaantii fi aangawoota irratti qeeqawwan hedduu tu dhihaata. Kun waggoota shantamaa yokaan jaatama dura, fakkeenyaaf yeroo prezidaantummaa Gamaal Abdel-Naasir wanna tahee hin beekne. Kanaaf, Masreiin gara fuul-duraatti tarkaanfataa jirti. Garuu, biyyoota wal-waraasa uummatoota biyyaa fi jaarraalee danuu dhaa booda dimookiraasii ijaarratan wajjiin wal-dorgomsiisuun hin danda’amu” jedhan.
Masriin gama tokkoon, akka Siiriyaa fi Liibiyaa wal-waraasa raayyaa biyyattiitiin toosisametti seenuu irraa of dhaabde iyyuu, gama kaaniin immoo bilisummaalee haarawa argaman ukkaamsitee jirti.
Prezidaantiin Masrii – Abdel Fattaa Al Siilii, bara 2014 keessa filatamanii bakka leellisaa Islaamummaa – Mohammed Morsii buusaman. Amma morsiin filannoo marsaa itti-aanuu kanaaf dorgomuu fedhan. Lammiwwan biyyattii keessaa gariin isaanii deggersas mormiis hin qaban, kaan ni morman, kaan immoo akka isaan taayitaa irra turan fedhan.
Hiriira Kaleessa VOA Irratti Geggessamee fi Deebii Dhabbatichi Kenne
Masriin Ka Muummichi-ministaraa Abiyyi Ahimed Hidhawwan 100 Ijaaruuf Karoorfanne, Jedhan Mormite
Haalli Kennisa Gargaarsaa Yoo Hin Fooyyofne Tigiraayitti Beelli Hamaan Mudachuuf Deema: Tokkummaan Mootumootaa
"Godaantoonni Carraa Maatii Biyya Ofii Keessatti Dhiisanii Ba’an Gargaaruu Argachuu Qabu"
“Hayyu Dureen ABO Obbo Daawud Ibsaa ‘Ji’ootaaf’ Humna Mootummaan Manaa Akka Hin Baane Uggurmanii Jiru” Amneestii Internaashinaal
Prezidaantoonni Amerikaa fi Raashaa Har’a Wal Arganii Dubbatan
Looltonni Ertraa Beela Akka Meeshaa Waraanaatti Gargaaramu: Angaawaa Tokkummaa Mootummootaa